Maitiro Ekuverengera Hupenyu Hwako Kukosha Kwako Nhare mbozha App Mushandisi | Martech Zone
Maitiro Ekuverengera Hupenyu Hwako Kukosha Kwako Nhare mbozha App Mushandisi
Muvhuro, Nyamavhuvhu 22, 2016 Muvhuro, Nyamavhuvhu 22, 2016 Douglas Karr
Isu tine ekutanga, makambani akasimbiswa, uye kunyange akanyanya-analytics uye akaomesesa makambani anouya kwatiri kuzobatsirwa kuwedzera bhizinesi ravo repamhepo. Kunyangwe saizi kana hunyanzvi, patinobvunza nezve avo mutengo-per-kutora uye kukosha kwehupenyu hwese (LTV) yemutengi, tinowanzo sangana nekutarisa kusine chinhu. Makambani akawandisa akaverenga mabhajeti zviri nyore:
Nemaonero aya, kushambadzira kunokwira kukwira mukoramu yemari. Asi kushambadzira hakusi kubhadharisa senge rendi yako… imari inofanirwa kunge iri kushanda kuti ikure bhizinesi rako Iwe unogona kuyedzwa kuti uverenge kuti mutengo wekuwana mutengi mutsva imwe dhora huwandu, uyezve iyo purofiti imari yawakawana pakutenga kwavo. Dambudziko neizvozvo nderekuti vatengi havawanzo kutenga kamwe chete. Kuwana mutengi ndicho chikamu chakaoma, asi mutengi anofara haangotengi kamwe chete obva asi - vanotenga zvakawanda vogara kwenguva yakareba.
Chii chinonzi Mutengi Hwoupenyu Hwose Kukosha (CLV kana CLTV) kana Hupenyu Hwose Kukosha (LTV)?
Mutengo wevatengi hwehupenyu hwese (CLV kana kazhinji CLTV), yehupenyu hwevatengi kukosha (LCV), kana hupenyu-hwenguva kukosha (LTV) ndiyo purofiti yakaverengerwa iyo mutengi achazopa yako kambani. LTV haina kuganhurirwa pakutenga kana huwandu hwegore, inosanganisira iyo purofiti inowanikwa kwenguva yehukama hwako nemutengi.
Ndeipi fomula yekuverenga LTV?
LTV = Hupenyu Hwose Kukosha
ARPU = Avhareji Revenue Pamushandisi. Mari inogona kuuya kubva kumubhadharo wekushandisa, kunyorera-kwakavakirwa mari, mukati me-app kutenga, kana kushambadzira mari.
Churn = Peresenti yevatengi yakarasika pane yakapihwa nguva. Kunyoreswa-kwakavakirwa kunyorera kunowanzo kuve gore ravo mari, churn, uye mari.
Kana iwe uri kuvandudza nharembozha, heino infographic kubva kuDot Com Infoway - Verenga iyo Hupenyu Nguva Kukosha (LTV) yeApp yako Vashandisi veMassive Branding & Kubudirira - iyo inopa kufamba-kuburikidza nekuyera iyo LTV yeako mobile app mushandisi. Inopawo dzimwe nzira dzekudzora churn uye kuwedzera purofiti.
Iko hakuna kupokana nezve chokwadi chekuti vanhu vazhinji uye vazhinji vari kushandisa yakawanda yavo yepamhepo nguva pane mobile apps. Kunyangwe izvi zvichireva kuti vashandisi vazhinji paapp yako, hazvireve kuti vese vashandisi vako vachabatsira. Sezvazviri kune mazhinji mabhizimusi mamodheru, 80% yemari inouya kubva kune 20% vashandisi. Kuyera iyo LTV yevashandisi kunogona kubatsira vashanduri veapp kuti vadzikise vashandisi vavo vepamusoro uye vagadzire zvinopihwa uye kukwidziridzwa kupa mubairo kuvimbika kwavo kusimudzira kuchengetedza. Raja Manoharan, Dot Com Infoway
Ukangonzwisisa kukosha kwehupenyu hwese mutengi wako, chiyera yako churn rate, ongorora mutengo wekuwana mutengi, iwe unonzwisisa kudyara kwauri kuita uye neavhareji kudzoka pane iyo mari.
Unogona kuita zvigadziriso kune chero imwe kana ese akasiyana. Ungangoda kuwedzera mutengo webasa rako kuti uchengetedze purofiti ine hutano. Ungangoda kuisa mari yakawanda mukushandira vatengi kuti uchengetedze vatengi vako kwenguva yakareba uye wedzera mari muapp kana kwenguva refu. Ungangoda kuti ushande kudzikisa mutengo wekutenga wevatengi kuburikidza nemaitiro ehupenyu uye ekukurudzira. Kana iwe unogona kuona kuti iwe unogona chaizvo kushandisa yakawanda mari pane akabhadharwa ekuwana matekiniki.
Tags: kuverengachurnrate of churnCLTVCLVmutengo pakutengakutenga vatengikuchengetwa kwevatengidcidot com infowayFormulamaitiro ekuverenga ltvinfographicltvMobile Anwendungnharembozha app ltvnharembozha yekushambadziranharembozha app roichii ltv